लन्डन — अन्त्यमा नोभाक जोकोभिचले चौथोपल्ट विम्बल्डन टेनिसको पुरुष एकल उपाधि जित्न धेरै मिहिनेत गर्नुपरेन । तर यहाँसम्म पुग्ने यिनै जोकोभिचले लामो संघर्ष भने गरेका छन् । सेन्टर कोर्टमा केभिन एन्डरसनमाथि ३१ वर्षे जोकोभिचले सोझो तीन सेटमा खेल जिते । यो उनले जितेको चौथो विम्बल्डन उपाधि त भयो नै ।
समग्रमा उनले जितेको १३ औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि रह्यो । यी सर्बियाली खेलाडी अब ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितेको संख्याका आधारमा अमेरिकी पिट साम्प्रासको ठीक पछाडि पुगेका छन् ।
समकालीन खेलाडीमध्ये उनको अगाडि राफेल नडाल र रोजर फेडेररले मात्र बढी ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितेका छन् । नडालले १७ र फेडेररले २० ग्रान्ड स्लाम जितेको उपलब्धि हात पारेका छन् । चोटका कारण दुई वर्ष सक्रिय खेलबाट टाढा रहेपछि अनि केही व्यक्तिगत समस्या समाधान गरेपछि जोकोभिचले पेस गर्ने चुनौती फेरि एकपल्ट जीवन्त भएको छ । अब उनले नडाल र फेडेररसँगै आफूलाई विश्वकै एक उत्कृष्ट टेनिस खेलाडीका रूपमा दाबी प्रस्तुत गर्नसक्छ ।
जर्मनीका बोरिस बेकर कुनै समय जोकोभिचका प्रशिक्षक थिए । उनले सन् २०१४–०१६ बीच उनलाई प्रशिक्षण थिए र यसक्रममा जोकोभिचले ६ ग्रान्ड स्लाम उपाधि जिते । उनी जोकोभिचबारे भन्छन्, ‘उनी कोमल हृदय भएका खेलाडी हुन् । उनको सफलताको आधार परिवार हो । उनी आफ्नी श्रीमती जेलेनासँग १० वर्षको वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन् । यसक्रममा दुवैले उचारचढाव देखे ।
के जोकोभिचलाई नडाल र फेडेरर बराबरीकै खेलाडी मान्न सकिन्छ त ? यसमा मेरो उत्तर हो, सकिन्न । हामी फेडेरर र नडाललाई माया गर्छौं तर जोकोभिचलाई भने सम्मान गर्छौं । यो नै उनलाई लिएर समस्या हो । त्यसैले जोकोभिचले आफ्ना दुई समकालीन खेलाडीको बराबरी गर्न धेरै मिहिनेत गरेका छन् । उनले त्यस्तो समय टेनिस खेलिरहेका छन्, जुन समयमा यी दुई महान खेलाडी पनि खेले । आउने केही वर्षमा जोकोभिचले थप केही ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्न सक्छन् । उनको खेलले यस्तै भनिरहेको छ ।’
चारपल्ट विम्बल्डन सेमिफाइनल खेलेका टिम हेनम्यानको पनि जोकोभिचलाई लिएर आफ्नै विश्लेषण छ । उनले भनेका छन्, ‘जोकोभिचका लागि पछिल्ला दुई वर्ष निकै कठिनाइपूर्ण रहे । एक समयका नम्बर एक खेलाडी २१ औं वरीयतासम्म पुगे । ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्नु र अरू प्रतियोगितामा सफलता हात पार्नुमा धेरै फरक छ । मलाई लाग्छ, जोकोभिचले अझै केही वर्ष राम्रा खेल्न सक्छन् । अहिले विम्बल्डन जितेर उनले सिद्ध गरेका छन्, उनीसँग अझै चुनौती पेस गर्ने क्षमता बाँकी छ ।’
कहाँ छन् युवा खेलाडी ?
ठीक यहींनिर एक अर्को प्रश्न पनि अगाडि आउँछ । ग्रान्ड स्लाम जित्न सक्ने युवा खेलाडी कहाँ हराए त ? सन् १९९० यता जन्मेका खेलाडीले पुरुषतर्फ ग्रान्ड स्लाम जितेको समाचारका लागि गरिँदै आएको प्रतीक्षा लामो हुन थालेको छ । नडाल ३१ वर्षका भए या २१ वर्षका । फेडेरर त झन ३६ वर्षका भए । सायद नयाँ पुस्ताका खेलाडीले पुरानो पुस्तालाई चुनौती दिनै नसक्ने हो त ? यसको एउटा उत्तर के हुनसक्छ भने जोकोभिचसँगै नडाल र फेडेररमा ग्रान्ड स्लाम उपाधिको जुन भोक छ, त्यो नयाँ खेलाडीमा छैन कि ?–बीबीसी
प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०८:२६